20W Na-enye aka na-enyere ndị mmadụ aka China Manufacturer
Nkọwa:Sistemụ Ọdịdị Anyanwụ,Sistemụ Ọdịdị Ike,20W System Power System
Sistemụ Ọdịdị Anyanwụ,Sistemụ Ọdịdị Ike,20W System Power System
Home > Ngwaahịa > Ụlọ igwe / DC > Obere Igwe Grid > 20W Na-enye aka na-enyere ndị mmadụ aka
Ubu oke: 2000pcs/day
Usoro HS: 8501310000
Nke a na-enye usoro mgbasa ozi anyanwụ dị iche iche nke usoro modulu solar cell, ike anyanwụ na-enyefe batrị batrị, njikwa anyanwụ, usoro generator na ihe ndị ọzọ. Enweghị mmetọ, nchekwa nchekwa, nchedo gburugburu ebe obibi, enweghị nchekwa, enweghị ihe mgbochi, obere ọnụ ala, nkwụsị ọrụ dị mfe, mkpofu nfe, mfe ịkwaga, ihe karịrị afọ iri abụọ nke ndụ ọrụ, ọtụtụ ụzọ nkwụnye ọkụ, mgbanwụ na mbara igwe enwere ike ịgba ụgwọ maka usoro ahụ, otu ego, uru bara uru. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ n'ọgbọ ụlọ, ụlọ, n'èzí, ntụrụndụ ndị njem nleta, ebe ịta nri nke ahịhịa ndụ, obodo nta ndị dịpụrụ adịpụ, àgwàetiti alpine, ezinụlọ, ugbo, ugbo, ugwu, agwaetiti, okporo ụzọ na ebe ndị ọzọ.
Usoro eji eme ihe:
1. Biko kwado usoro mbara igwe dị ka usoro ndị a:
1) ike anyanwụ na-akwụ ụgwọ:
Gbanyụọ usoro ahụ ma tinye ya kpọmkwem n'okpuru ìhè anyanwụ, hụkwa na oghere ndị dị na mbara igwe nwere ìhè dị ka o kwere mee. Mepee "Ike"
Gbanwee nnabata nna ukwu, ma ọ bụrụ na "batrị 8" na batrị batrị na "11 Indicator" na-egosi ọkwa, na-egosi na ngwaahịa ahụ na-akwụ ụgwọ. Ihe ngosi batrị 8 nke batrị na-amụba nwayọ mgbe batrị batrị ma kwụsị ịkwụsị iji kpuchie batrị ahụ.
2) Ike AC na-akwụ ụgwọ:
Tụgharịa "5 Ike Gbanwee" nna ukwu ịgbanwee ma jikọọ usoro ahụ na oghere AC site na interface "2 AC Input Interface" interface. Ọ bụrụ na "igosi Batrị 7" na batrị "11 Ngosipụta" na-egosi, ngwaahịa ahụ na-akwụ ụgwọ ugbu a. Ihe ngosi batrị 8 nke igosi batrị na-egosiputa ngwa ngwa mgbe batrị zuru ezu, a ga-ewepụ waya iji chebe batrị ahụ.
Sistemụ Ọdịdị Anyanwụ
Sistemụ Ọdịdị Anyanwụ nke Rooftop
Sistemụ Njiji Ọrụ